Pidgin နဲ့ Facebook ကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ Linux မှ
Pidgin နဲ့ Facebook ကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | applications များ
ငါတို့ပထမဆုံးအကြိမ်ပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ Facebook က ဆိုက်တွင်ယခင်ပို့စ်များကိုစစ်ဆေးပြီးသော်လည်းချက်ချင်းလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်း (ဤကိစ္စတွင် Pidgin) ကိုဤကွန်ယက်နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တစ်ခါမျှမရှင်းပြဘူးကြောင်းသဘောပေါက်ခဲ့သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ရှိတဲ့သုံးစွဲသူနည်းနည်းပဲရှိသေးပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာစွဲလမ်းသူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုတည်းသောအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အသိအကျွမ်းများနှင့်ချက်တင်စကားပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမွေးမြူရေးခြံမှာတိရိစ္ဆာန်များကိုကျွေးမွေးရန်၊ တစ်နေ့တာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ horoscope ကိုသိရန်စသည်။
ငါဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း chat ကိုသာစိတ်ဝင်စားသောအသုံးပြုသူများအတွက်၊ ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်တို့၏ Pidgin (Kopete, Empathy, etc) ကဲ့သို့သော instant messaging application များသည် Facebook အတွက်အထောက်အပံ့ရှိသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိဘဲ Facebook chat ကို Pidgin နှင့်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုဤတွင်ကျွန်ုပ်ပြပါလိမ့်မည်။
1. ပထမ ဦး စွာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ distro တွင် Pidgin ကိုထည့်သွင်းရမည်။
သင်သုံးလျှင် ArchLinux, Chakra သို့မဟုတ်အချို့သောဆင်းသက်လာ:
သင်သုံးလျှင် debian, Ubuntu ကို သို့မဟုတ်ဆင်းသက်လာ:
2. ပြီးရင် Pidgin ကိုဖွင့်ပြီးသွားရမယ် အကောင့်များ - »အကောင့်များကိုစီမံပါ :
3. အဲဒီမှာကျနော်တို့ button ကို select လုပ်ပါ ပေါင်း
4. ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။
ဒီမှာဘာကိုရည်ညွှန်းသည်ကိုရှင်းလင်းရန်အရေးကြီးပါသည်user name«။ ဒီနေရာမှာငါတို့ဖေ့စ်ဘုတ်ပရိုဖိုင်းရဲ့နောက်ဆုံး / နောက်ဆုံး URL ကိုဖော်ပြရမယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ Facebook profile URL မှာ http://www.facebook.com/ ဖြစ်သည်။kzkggaara ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူအမည်ထားလိမ့်မယ် kzkggaara နောက်ဥပမာတစ်ခုကကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက် URL မှာ http://www.facebook.com/Alejandro.DesdeLinux.Website... ဖြစ်ပြီးမည်သည့်အသုံးပြုသူဖြစ်မည်နည်းဆိုပါကတနည်းအားဖြင့် Alejandro ။
5. ပြီးရင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ပေါင်း နှင့် voila, သူကကျွန်တော်တို့ကိုသူငယ်ချင်းစာရင်းကိုပြသလိမ့်မည်
ပြီးတော့ကဲဒါဆိုငါတို့ဖွင့်တာကိုရှောင်တယ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် Facebook.com နှင့်အတူ bandwidth ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။
ဆောင်းပါးကမင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် (လူမှုရေးအရမဟုတ်ဟုထင်ရမည့်) သုံးစွဲသူများအတွက်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်သင်ခန်းစာများအတွက်ကောင်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ Timeline ကိုဖုံးလွှမ်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Pidgin နဲ့ Facebook ကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ
ငါတပ်ဆင်ထည့်သွင်းလိမ့်မယ် https://code.google.com/p/pidgin-gnome-keyring/ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်အသုံးပြုသူအိမ်သို့ဝင်ရောက်သူမည်သူမဆို ~ / .purple / accounts.xml ကိုကြည့်ရုံဖြင့်သင်၏စကားဝှက်အားလုံးကိုပြုလုပ်နိုင်သည်
gnome ကိုမသုံးသောသူများအား pidgin အတွေးအခေါ်များတွင်စကားဝှက်များကိုစာဝှက်ရန်ပိုမိုယေဘူယျနည်းလမ်းကိုမည်သူမဆိုသိရှိခြင်းရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ။
တကယ်တော့ငါ KDE ရဲ့ Gnome-Keyring P ဖြစ်သည့် Pidgin + KWallet ကိုအသုံးပြုသည် https://blog.desdelinux.net/pidgin-con-kwallet/
NW, KWallet သည်သင်ဖော်ပြခဲ့သော GNOME Keyring ထက်အများကြီးပိုသည်
ကျွန်ုပ်သည် Facebook chat client အတွက် Thunderbird ကိုနှစ်သက်သည်။
ငါfacebú like မကြိုက်ဘူး
သငျသညျလိုလျှင်, ငါ diaspora ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်သင့်အားဖိတ်ကြားပါ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၏ XMPP ကွန်ယက်ကိုပိတ်ထားလျှင်ဘာကိုအသုံးပြုမည်နည်း။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသုံးပြုသူများအကြားစကားပြောနိုင်သည်။ WhatsApp၊ Line, Viber, Hangouts နှင့် XMPP protocol ကို hell သို့ပို့သောထိုအက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးသည်လည်းအလားတူဖြစ်သည်။
Pidgin ပါသော Facebook၊ ငါပီရူးနိုင်ငံ၊ အရီကူပရာမှဖြစ်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံအီးမေးလ်ကို အသုံးပြု၍ သတင်းစာများတွင်ဥပမာ - ပီရူး၊ ကာရာမာကာ - သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးရန်အီးမေးလ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါ့အစိုးရ၏သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးငါစဉ်းစားမိတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအီးမေးလ်နဲ့ဘယ်လိုဖော်ထုတ်ရမလဲဆိုတာအဆုံးမှာငါမေးခွန်းထုတ်တဲ့ပြonနာတခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော့်ထင်မြင်ချက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးတဲ့အတွက်ဆင်ဆာဖြတ်ခံရရင်ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊
ကျွန်မမသိဘူး၊ ရွယ်တူချင်းတွေနဲ့စကားမပြောချင်တဲ့သူတွေကိုလူမှုရေးအရဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုတာကျွန်မနားမလည်ဘူး; ၎င်းသည်ရှင်းလင်းသောဆွေးနွေးမှုတစ်ခုသာရှိလျှင်၊ ရှင်းလင်းစွာဆွေးနွေးထားသည်။ ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်မြင်ချက်တွေ (သို့) အကြံဥာဏ်တွေဝေမျှတဲ့ GNU Linux ကိစ္စမျိုးလို၊ သူသည်သူတစ်ပါးအမျိုးသားများနှင့်သူပိုင်ဆိုင်သည့်သုခချမ်းသာကိုမျှဝေခံစားနိုင်စွမ်းမရှိသောမည်သူမဆို၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းအားဖြင့်ယဉ်ကျေးမှုကင်းမဲ့ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောလူမှုရေးဆိုင်ရာလူမှုရေးဆိုင်ရာလူမှုရေးဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်များကိုကျွန်ုပ်ထင်မြင်သည်။ သုခချမ်းသာ၊ တာဝန်စသည် သူ၏ထူးခြားသောအစုအဝေးများထဲမှတစ်ခုအပါအဝင်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဤဘလော့ဂ်ကြီးကိုဖတ်ရှုသူတစ် ဦး စီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤ piding နှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသုံးချပရိုဂရမ်များအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းသည်လူမှုရေးဆန့်ကျင်ရေးစဉ်းစားသောအပြုအမူနှင့် ပါတ်သက်၍ ပို၍ ပြောပါသည်။
လူအတော်များများကအဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး လူမှုရေး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အကြိမ်ကြိမ်ပါကသူသည်ပွင့်လင်းသောစိတ်ရှိသူအားတံခါးပိတ်စိတ်ရှိသည့်လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်လက်ခံခြင်းမပြုနိုင်သောပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။
နောက်ပြီးခေါင်းစဉ်ကိုပြန်ကြည့်ရင် Thunderbird ကို Facebook Chat client တစ်ခုအနေနဲ့လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ အမှန်တရားကတော့ #IRC ကိုသုံးဖို့သင်ရွေးချယ်နိုင်တယ် (အခုထိငါအသုံးပြုခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံး chat ဂေဟစနစ်) ။
စီးပွားဖြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်သင်သဘောမတူပါကသင်သည်အစွန်းရောက်ဘာသာရေး၊ တာလီဘန်၊ ဂူမန်၊
စီးပွားရေးမူဝါဒများနှင့်သင်သဘောမတူပါကသင်သည်မာ့က်စ်ဝါဒီ - ကွန်မြူနစ် - ဘာဂါ - အစ်စရေးဝါဒီ (အရ) ဖြစ်သည်။
အားနည်းစိတ်ကိုအများစုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အဆုံး၌သူတို့ကယုံကြည်သူလည်းသူတို့ကထပ်ခါတလဲလဲဒါကြောင့်သင်ထပ်ခါထပ်ခါတစ်ခုခုပြန်လုပ်ရန်အဘို့အလုံလောက်သောကြောင့်ထိုသို့အမြဲဖြစ်ခဲ့ပုံကိုထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါသည် ယုတ္တိရှိသည့်အငြင်းပွားမှုများနှင့်ငြင်းခုံ။ မရသောအခါ၎င်းတို့သည်သာလွန်မြင့်မြတ်သည့်အနေအထားတွင်ခံစားရရန်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်တံတားထိုးခြင်း။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကုမ္ပဏီတွေ / အစိုးရတွေအားလုံးကကောင်းကောင်းသိတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါး, pidgin အတွက်, ငါကအချိန်ကြာမြင့်စွာမသုံးခဲ့ဘူး, နှင့် Facebook ကိုမပါ။ ငါ twitter နှင့် hotot ပိုမိုသွား ..
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ကိုဆက်သွယ်လို့မရဘူး၊ ငါအရင်ကအများကြီးကြိုးစားခဲ့ဖူးပေမယ့်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိနိုင်တော့ဘူး။ ကောင်းကောင်းလေးပဲ။ ငါ့ညီမလေးကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှထွက်ခွာပြီးချက်တင်ကိုသာသုံးမည်။
port တစ်ခုထက်ပိုသော SSH access ကို enable လုပ်ပါ
Application တစ်ခု (သို့မဟုတ်အများအပြား) သည် Operating System တစ်ခု၏အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသလား။